Global Voices teny Malagasy » Jadona anaty aterineto ao amin’ny Repoblika Islamikan’i Iran · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Aogositra 2010 8:11 GMT 1	 · Mpanoratra eli Nandika avylavitra
Sokajy: Iràna, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifidianana, Media sy Fanoratan-gazety, Teknolojia, Zon'olombelona
Hatramin'ny taorian'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2009 , nanenjana ny fepetra faneriterena ny gazety ny repoblika islamikan'i Iran ka tadfiditra amin'izany ireo mpitoraka blaogy sy ny sehatra fitoraham-bolongana madinika toy ny Facebook sy twitter. Na dia efa zava-panao mahazatra ao amin'ity repoblika islamika ity aza ny faneriterena ny gazety, tamin'ity indray mitoraka ity kosa, tena nihoatra lavitra noho izay mety ho takatry ny saina ny haavon'ny zava-doza misy amin'ny resaka sivana.
Maro ireo lahatsoratra momba ny sivana atao amin'ny gazety iraisam-pirenena sy ny gazety iraniana, saingy toa hafahafa ihany, tsy dia nahita loatra aho zavatra mavesa-danja momba ny fanivànana ireo Iraniana mpitoraka blaogy sy ny fahasahiranan'izy ireo mikasika ny fahalalahana miteny nandritra io fotoana io. Fifaninanana misy eo amin'ny tontolon'ny gazety Iraniana ve izy ity ka tsy manana izay tokony hambarany momba ny tsy fahampiam-baovao mikasika ny zava-misy iainan'ny mpitoraka blaogy Iraniana ireo blaogy hatreto? Mety ho izay angamba, saingy tsy manam-baovao ampy ho entina miadihevitra mikasika an'io resaka io aloha aho izao. Raha raisina ho milaza ny marina sy tena tanjaka marin'ny demokrasia sy ny fahalalaham-pitenenana eo amin'ny tontolon'ny cyber àry ireo Iraniana mpitoraka blaogy, dia mieritreritra aho fa tokony hisy fitandremana bebe kokoa horaisina eo amin'io kianja io ho an'ny vondrom-piarahamonin'ireo Iraniana anaty aterineto.
Raha mbola mihazona hatrany ny fanoherana mafy ny fahalalahana miteny sy ny fivezivezena malalaky ny vaovao i Iran, ireo Iraniana mpitoraka blaogy sy ny vondrom-piarahamonina anaty aterineto kosa dia nitombo be lavitra noho ny teo aloha. Heveriko fa io dia azontsika avy amin'ny jadom-panjakana sy ny tsy fisian'ny fahalalahana eo amin'ny fiainana andavanandron'ny vahoaka izay namadika ny feon'ireo Iraniana vitsivitsy mba afaka manana fahafahana miditra ho lasa feon'ny fanoherana eo anivon'ny aterineto ary zavatra tokony holalàintsika izany ka hanomezantsika azy ireo fitenenana bebe kokoa any amin'ny gazety, toy izay hanàkana ny feon-dry zareo noho ny resaka fifandrafiana fotsiny. Araka izany, mamelà ahy hitanisa fohy ny toerana misy ireo Iraniana mpitoraka blaogy sasantsasany  nanàraka an'iny fifidianana filoham-pirenena naha-be resaka tamin'ny 2009 iny.
Fivoaran'ireo Feo voarahona tao Iran – Loharano: Threatened Voices
Tato anatin'ireo volana vitsy farany teo dia nahitàna vaovao mampalahelo mikasika ireo Iraniana mpitoraka blaogy. Hamed Saber , mpitoraka blaogy an-tsary iray, tamim-pahakingana sy fahamalinana tokoa dia naka sary ireo hetsi-panoherana taorian'ny fifidianana ka nizara azy ireny ho an'ny daholobe tao amin'ny kaonty Flickr-ny  sy Picasa  . Nampientanentana azy tokoa ny traikefany voalohany momba izany fakana sary an-gazety eny anivon'ny hetsi-panoherana izany, tsy fantany ireo fampitandremana sy ny mety ho resaka fampidirana am-ponja fotoana maharitra noho ny fakàna fotsiny sary vitsivitsy avy amin'ireo mpanao fanoherana eny an-dalamben'i Teheran. Farany dia nosamborin'ny manampahefana izy tamin'ny volana lasa iny ary dia nogadraina tsy nandalo fitsarana nanomboka teo.
Hossein Ronaghi Maleki fantatra amin'ny hoe “Babak Khorramdin”, mpitoraka blaogy iray sady mpikambana ao amin'ny Iran Proxy group  dia nosamborina efa ho 8 volana mahery ary nampijaliana ka noterena hanao fiaikena tamin'ny fahitalavitra. Iran Proxy dia vondrona miafina iray miady manohitra ny sivana atao amin'ny aterineto, indrindra fa nandritry ny krizy taorian'ny fotoam-pifidianana. Nanafay mafy tokoa ireo rafitra fifandraisan-davitra i Iran ary nampihatra fangejana hentitra amin'ny aterineto tamin'izany fotoana izany.
Fariborz Shamshiri , petsam-bava iray, fa koa iraniana iray mpitoraka blaogyamin'ny teny anglisy, mahatonga fifandiran-kevitra matetika , sady tsy mpino mafana fo , dia manangam-peo momba ny fandrahonana ho faty voarainy efa ho fotoana elaela ihany izao . Manoratra ao amin'ny “Rotten Gods ” sy ny “Stop torturing us “ i Fariborz Shamshiri . Manakiana ny governemanta Iraniana izy, ny fitondram-panjakana fehezin'ny resa-pinoana ary izy dia mpiaro fatratra ny Fahalalahana Miteny sy ny Zon'Olombelona. Nalàza ny blaoginy noho ireo rako-baovao momba ny taorian'ny fifidianana natao ho an'ireo mpamaky amin'ny teny anglisy tany amin'ny taona 2009. Raha nikisaka nimpirimpirina izy, noho ny tahotra ny amin'ny ainy, nampanarahany ny zava-misy hatrany kosa ny blaoginy.
Nasour Naghipour , mpitoraka blaogy iray nosamborina tamin'ny Martsa 2010, dia nafàhana mandra-piandry ny fotoam-pitsarana rehefa avy nandoa 100 tapitrisa toman (75,000 euros) ho antoka.  Notanana am-ponja nandritry ny 110 andro izy tao amin'ilay fonja malaza ratsin'i Evin . Tsy nomena alàlana hitsidika ny olona arovany ny mpisolovava azy nandritra ny fitazonana azy am-ponja, ary ireo tomponandraikitra dia tsy mbola nisy nanondro mazava izay heloka momba ny raharahan'i Naghipour. Zava-dehibe ny anamarihana fa izy dia namoaka lahatsoratra momba ny Filaozofia, ny kolontsaina ary ny zavakanto tao amin'ny blaoginy  sy ny tranonkalany 
Hossein Derakhshan  nantsoina ho ilay ‘rain'ny blaogy teo amin'ny tontolon'ny fitorahana blaogy Iraniana, ary Iraniana mpitoraka blaogy mahabe resaka tokoa izay nanampy tamin'ny fampahafantarana ny fitorahana blaogy teo amin'ny Repoblika Islamikan'i Iran , dia niatrika fitsarana. Efa nahavita 600 andro tany an-tranomaizina izy talohan'ny niatrehany fitsarana satria efa tamin'ny Novambra 2008 izy no voasambotra. Tsy mbola mazava mihitsy ny ho tohin'ny aminy ary mbola maro ny mpitoraka blaogy no toa azy. Amin'ity fotoana iresahana ity dia mbola marobe ireo mpitoraka blaogy hafa any am-ponja izay manome endrika an'i Iran ho ny fonja goavambe indrindra ho an'ireo mpitoraka blaogy sy mpanao gazety .
Ireo dia sombiny amin'ireo Iraniana mpitoraka blaogy takatry ny tànana ihany izay, na ry zareo nalefan'ny governemanta any am-ponja na nahazo fandrahonana ny amin'ny ainy. Misy ireo sasany nisafidy ny hampiasa ny tena anaranyary ireo sasany tsy mitonona anarana mba hanalavirana ny gidragidra. Mampiasa tetika fampitahorana ankolaka ihany koa i Iran mba haneriterena ny fahalalahana miteny ao anivon'ny aterineto. Na izany aza anefa, mijoro hatrany ireo Iraniana mpitoraka blaogy mba hanohitra ireo sakana rehetra ka mampibaribary amin'ny fanoratàna mikasika ny zavatra iainan-dry zareo sy ny fahalalàny avy ao Iran. Izany dia manampy ny tontolo any ivelany hahafantatra tsara ny tena zava-mitranga eo ambany fitondran'ny repoblika Islamika.
Nanaraka manokana Iraniana maromaro mpitoraka blaogy aho ary nahita ny fomba fijery samihafan'izy ireny momba ity firenena ity, ny politikany, ary koa ireo nofinofin-dry zareo sy fanantenany ho azy ity. Toy ny hoe fananan-dry zareo demokrasia sy fahalalahana miteny anaty aterineto izay tian-dry zareo marina tokoa ho entina mivoaka eo anivon'ny fiainana andavanandrony. Heveriko fa na dia fanohanana ara-tsaina sy ara-teknolojika kely fotsiny aza dia efa fanampiana lehibe ho an'ny tolon-dry zareo ireo hanatràrana demokrasia malalaka izay tena ilain-dry zareo tokoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/08/19/8371/
 fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2009: http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_presidential_election,_2009
 Iraniana mpitoraka blaogy sasantsasany: https://threatened.globalvoicesonline.org/bloggers/iran
 tsy mpino mafana fo: http://www.iranianatheist.com/
 fandrahonana ho faty voarainy efa ho fotoana elaela ihany izao: http://committeetoprotectbloggers.org/2010/07/24/iranian-atheist-blogger-receives-threats/
 dia nafàhana mandra-piandry ny fotoam-pitsarana rehefa avy nandoa 100 tapitrisa toman (75,000 euros) ho antoka.: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c247e3dc.html
 fonja malaza ratsin'i Evin: http://en.wikipedia.org/wiki/Evin_Prison
 nanampy tamin'ny fampahafantarana ny fitorahana blaogy teo amin'ny Repoblika Islamikan'i Iran: http://thelede.blogs.nytimes.com/2010/06/24/trial-of-irans-blogfather-begins-in-tehran/
 manome endrika an'i Iran ho ny fonja goavambe indrindra ho an'ireo mpitoraka blaogy sy mpanao gazety: http://www.ifex.org/iran/2010/06/25/baghi_freed/